Trump oo ku guulaystay baaritan laba sanno ku socday - BBC News Somali
Trump oo ku guulaystay baaritan laba sanno ku socday
Eedeyntan ayaa dul hoganaysay labadii sano ee ugu horeysay ee madaxweynenimada Mr Trump, iyo asxaabtiisiina waxay arkeen natiijada warbixinta si ay u noqoto mid dhiirrigelisa fursadaha dib-u-doorashada. Trum ayaa aaminsan inay eedaymahaan ahaayeen kuwa been abuur ah.
Ol'olihii doorashada ee madaxweyne Trump wada shaqayn ma dhex marin Ruushka intii lagu guda jiray doorashadii 2016, sida ay sheegayso warbixin kooban oo Aqalka Kongresska uu u gudbiyay Robert Mueller oo ah dambi baare khaas ah.
Warbixintan kooban ayaanse meesha ka saarin in madaxweyne Trump uu si sharci darro ah u hor istaagay caddaaladda.
Xeer ilaaliyaha guud ee dalka Maraykanka William Barr ayaa xogtan kooban ee xildhibaannada lala wadaagay ka soo dhex saaray natiijadii ka soo baxday baaritaankii la sameeyay.
Madaxweyne Trump oo arrintan ka jawaabaya ayaa Twitterka ku soo qoray "wada shaqaynna ma jirin, caddaalad la hor istaagayna ma jirin."
Kaaliyihii hore ee Trump oo been u sheegay dacwad oogeyaasha
Madaxweynaha Maraykanka oo looga wada tagayo Aqalka Cad!
Trump oo baaritaanka si joogto ah ugu tilmaami jiray quraafaad ayaa Axaddii sheegay "in ay waji gabax tahay in dalku uu marxaladdan maro isaga oo ku tilmaamay "arrin sharci darro ahayd oo guuldarraysatay".
Xogtan cusub ee la soo saaray ayaa ah natiijo ka dhalatay baaritaan uu labo sano wadday Mueller, taas oo horseeday in kaaliyeyaashii ugu dhawaa madaxweyne Trump dacwado lagu soo oogo, qaarkoodna xabsi la dhigo.
"Inkastoo aan warbixinta lagu soo gunaanadin in madaxweynuhu ambi galay, haddana lama bari yeelin," ayuu Muller ku soo gudbiyay natiijada baaritaankiisa.